Prof Fesera sy Prof Feta - Dinika forum.serasera.org
Prof Fesera sy Prof Feta
Fitohizan'ny hafatra : Prof Fesera sy Prof Feta
rhaj0 - 03/08/2017 23:28
Nakisako eto ity resak'i RKjeanclaude ity, fa hotsahotsan'ny tena resaka fototra..
RKjeanclaude - i prof..... fesera no miteny, misy demos, mino izay lazainy isika na dia tsy hitatsika aza.
-i prof..... feta no miteny, aza minomino foana eo, ario any na dia iainantsika aza.
A--- i prof..... Fesera anie rehefa miteny dia:
1- ny zavatra/resaka narosony dia nojeren'ny Fesera namany ary no-reproduiser-na, independamment. satria ilay fahalalana sy rezonema dia iraisana samy ananana.
2- ny zavatra/resaka narosony dia mifototra amina porofo mivaingana, sy/na fahalalana taloha (fototra) izay efa niaraha-nanaiky (voaporofo), ary ireo "mivaingana" ireo, dia afaka hadihadian'ny tsi11 sy ny rehetra koa.
Io izany dia TSY misy izany hoe "mino = manaiky-tsisy-porofo" izany eo, fa "manaiky-fa-samy-mampiasa-coco".
Ary ny tenenin'i Prof Fesera, dia na ianao RKjeanclaude io azany, rahefa mba mampiasa ilay coco, dia afaka ny miteny azy koa.
3- ary ny aroson'ny Fesera anie, dia nampiasana, na fitaovana, na teoria, izay efa iaraha-manaiky ny mampety azy (valide), ary na ianao RKjeanclaude io azany, dia mikatsentsitra ny novokariny.
B--- i prof..... Feta indray rahefa miteny dia:
1- ny zavatra/resaka narosony dia ... ekena fotsiny. TSY afaka reproduiser-na, independamment, satria ny resak'i Feta (hono) dia unique, TSY iraisany @ n'izan'iza afa-tsy ... ny imazinasion-ny.
2- ny zavatra/resaka narosony dia mifototra .. @ "minou fotsy".
Izany hoe, ny tenenin'i Prof Feta, dia TSY vitanao tenenina koa, satria ianao TSY "toa an'i Feta", satria tsy Fetafeta eny daholo izay te-ho Feta. Ary dia tsisy ataonao afa-tsy ny "mino = manaiky-tsisy-porofo", ary ny hany ataonao, ianao RKjeanclaude, dia ny miboloky.
3- ary ny aroson'ny Feta, dia ... izay mihaino (sy mino) an'i Feta ihany no misahobihoby ao, fa ny hafa rehetra, toa ny Zaponehy, Sinoha sy Kaharana ka h@ Hamazoniana, h@ Heinstein sy Mandelaha ka h@ Dalai-Lamaha, dia ... mikimokimo fotsiny... ha ha ha
rhaj0 - 06/08/2017 00:08
vakansy kely indray fa @ manaraka manao bebe ee...
Miharena - 07/08/2017 19:05
Aza dia apetraka amin'ny fombafomban'olombelona mandinika zavaboary ilay fironan-tsainao Rhaj0 fa izany faminaniana izany anie ka manambara tranga hiseho. Ny ataon'ny mpandinika dia ny manamarina fa hitranga ilay zavatra voalaza.
Ohatra : hamaly izao Rhaj0 fa ho betsaka ny ateista ary izy dia anisany
Dia hoy ny Baiboly hoe : hisy ny fihemorana mavaivay any aoriana any. Dia voamarina fa ny tarika manana fombam-pisainana toa an'dRhaj0 no voambara amin'io filazana io. Izay no atao hoe faminaniana.
Hafa indray ilay mpampianatra. Ny mpampianatra dia mianatra aloha vao mampianatra ary ny vontoatin'ny fianarany dia mirona amin'ny toetoetry ny singa maro izay dinihiny.
Mety hisy mpampianatra koa ireny faminaniana ireny. Ity farany dia maneho izay vokatry ny faminaniana fa tsy mamorona fa mamaky fotsiny ny tranga dia mampahalala ny hafa hoe izao no tranga mifandraika amin'io faminaniana io. Io ohatra nomeko io izao dia faminaniana izay tanteraka amim-dRhaj0.
rhaj0 - 15/08/2017 19:23
Dia ahoana azany koa ohatra ny "faminanian'i Nostradamus"?? Na dia tsy ao anaty Baiboly azany io??
Dia ahoana ny "faminanian"ny an'ny HINDU (mpandinika): Vishnu will appear again soon, as Kalki, a white horse, destined to destroy the present world and to take humanity to a different, higher plane.
Dia ahoana ny "faminaniana BOUDISTA (mpandinika): .. the future Buddha, who will lead the world at a future period, and who will bear the name of Maitreya. (..) For 60,000 years Maitreya, the best of men, will preach the true Dharma, which is compassionate toward all living beings. And when he has disciplined in his true Dharma hundreds and hundreds of millions of living beings, then that leader will at last enter Nirvana. And after the great sage has entered Nirvana, his true Dharma still endures for another ten thousand years.
Fa diniho ange ny an'ny ZOROASTRIANS (izay nalain'ny Kristiana tahaka hono), hozy ny mpandinika: Zoroastrian ... was thus the first to teach the doctrines of an individual judgment, Heaven and Hell, the future resurrection of the body, the general Last Judgment, and life everlasting for the reunited soul and body.
Miharena - 16/08/2017 16:04
Ireo rehetra ireo Rhaj0 dia mazava fa misy fandinihina ny fivoaran'ny fanahy avokoa.
Izany hoe mila miaiky aloha fa na iza na iza olombelona dia manana traikefa amin'ny fisian'ny fanahiny avy ary mahita fa misy ireo lalanan'ny fanahy izay tsy azo ihodivirana.
Dia io lazaintsika io hoe misy ny olona dia lasa mitady porofo fa tsy misy ny fanahy ary tsy misy namorona izany sy izao rehetra izao fa nisy ho azy?!!
Dia hita hoe mampihomehy raha toa ka ity farany no mitranga raha efa nanana traikefa momba ny Dharma, ny Karma, ny Nirvana, ny Fanahy Masina sy ny sisa no manjary milaza fa tsy fandalinana ara-panahy izany rehetra izany.
rhaj0 - 16/08/2017 16:56
Takatrao tsara izany fa ny Hindou sy Boudista ary Zoroastrian, efa an-jatony na an'arivo taonany TALOHAN'NY Kristiana, dia efa "naminany" ireo resaka (vinany) ireo.
Dia NAKA TAHAKA koa ny Kristiana. TSY mitovy tanteraka fa sahala ihany.
Dia nataok'ty rehefa TSY ao anaty Baiboly dia "sampy" (sy Devoly) moa ny resaka ry Miharena..
Sa moa, ny anao Miharena dia afangarogaroinao ao na Kristianisma na Boudisma, na NOstradamus na Tsaratsara, na cartomancie na horoscope koa, fa rahefa ... metimety @ imazination-nao ao ny baolina dia baonina.
Tairo ao izany dia ampahalalao @ besinimaro mihintsy eee...
Miharena - 17/08/2017 09:32
Tsy hoe resaka ampifangaroina io fa fametrahana hoe samy nanana ny fahafantarany ny momba ny fanahy sy ny fivoaran'ny ain'olombelona ny mpandinika isan-tsokajiny.
Fa raha toa ka Baiboly no resahana dia manome famaritana mazava izy momba ny fiainana mandrakizay dia izay hita ao amin'ny IIKor 15: 34-54 ity:
40 Ary misy tenan'ny any an-danitra, ary misy tenan'ny et? an-tany; fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra, ary hafa ny an'ny et? an-tany.
54 Fa rehefa mitafy ny tsi-fahalòvana ity mety maty ity, ary mitafy ny tsi-fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe: Ny fahafatesana noresena ka levona* (Isa. 25. 8).
Arak'io dia mazava fa misy ny fiainana aorian'ny fodiamandry.
Isan'ny nanehoana ny fahamarinan'ireo teny ireo ny olona nofohazina teto Madagasikara.
Dia io Tsaratsara lazainao fa miteniteny foana io efa nanehoana fa afaka manana vatana hafa any an-danitra.
Ilay resaka ataon'ny Boudha, Zoroastre sy ny sisa anie dia mazava fa fandinihina ny momba ny fanahy hoy aho aminao Rhaj0 e!
Zava-nisy izany fa voafintina ao anaty Baiboly kosa ny TENA IZY fa tsy arakarak'izay heverinao akory Rhaj0.
rhaj0 - 17/08/2017 17:52
1- mbola manamafy ny finoany an'i Tsaratsara ihany i Miharena; tena tsy mivily @ io mihintsy ranamana. Izay izy io izany ry Miharena an... Fa tsy hoe, i Tsaratsara dia mpisoloky mpanodina ny resa-baiboly sy ny sain'olona.
2- Dia hitako io koa izany, fa @ Miharena, ny "Boudha, Zoroastre sy ny sisa" dia "fandinihina ny momba ny fanahy" koa, fa fotsiny, ny "ao anaty Baiboly kosa ny TENA IZY" hono, hozy Miharena. Izay koa izy io izany ry Miharena an... Fa tsy hoe, izay tsy ao anaty Baiboly dia sampy/devoly (na dia naaka tahaa iretsy hafa talohany azany ny Kristianina).
3- Ary ny cartomancie sy horoscope koa ve koa k'lou ho'a ao anatin'izany "fandinihina lalina ny @ fanahy" izany @ Miharena?? Amafiso kely hoe ee..
(tena tandremo tsara ny valinteny, fa ianao Miharena moa efa nidoka-tena ho "kipantsin'Andrmntra" ka dia mijery tsara anao ny rehetra, na izaho moa izany eee...)
Miharena - 17/08/2017 19:05
Eny ary fa hovaliana tsara izy ity.
Ao anaty Baiboly ihany isika no maka lesona. Jereo ny Isaia 47 manontolo izay mivaky toy izao hanazavana azy:
1 [Ny handravana an'i Babylona] Mialà, ka mipetraha amin'ny vovoka, ry Babylona, zanakavavy virijina! Mipetraha eo amin'ny tany, fa tsy amin'ny seza fiandrianana, ry Kaldea zanakavavy! Fa tsy hatao hoe vehivavy malemilemy sy mihantahanta intsony ianao.
2 Alao ny vato fikosoham-bary, ka kosohy ny koba; esory ny fisalobonanao, akaro ny moron-tongotr'akanjonao; aoka hiseho ny fenao, ka miroboha mita ny ony.
3 Hiseho ny fitanjahanao, eny, ho hita ny fahamenaranao; hitondra famaliana Aho ka tsy hiantra olona*.[Na: tsy hiera amin'olona; na: tsy hihaona amin'olona]
4 Ny anaran'ny Mpanavotra anay dia Jehovah, Tompon'ny maro, Iray Masin'ny Isiraely.
5 Mipetraha mangingina, ka midìra ao amin'ny maizina, ry Kaldea zanakavavy! Fa tsy hatao hoe Tompovavin'ny fanjakana intsony ianao.
6 Tezitra tamin'ny oloko Aho; navelako holotoina ny lovako, ka natolotro ho eo an-tananao izy, tsy mba namindranao fo izy, fa na dia ny antitra aza dia nasianao zioga mavesatra dia mavesatra.
7 Ary hoy ianao: Ho tompovavy mandrakizay Aho; ka dia tsy nandatsaka am-po izany zavatra izany ianao, na nitsapa izay hiafarany.
8 Koa mihainoa, ianao izay mihantahanta sady mipetraka tsy manana ahiahy ka manao anakampo hoe: Izaho no izy, ary tsy misy hafa; tsy hipetraka ho mpitondratena aho, na hahita fahafoanan'anaka.
9 Kanjo hanjo anao tampoka amin'ny indray andro monja ireto zavatra roa ireto, dia ny fahafoanan'anaka sy ny fananoan-tena; Hotanterahina aminao avokoa izany, na dia maro aza ny fankatovanao, ary na dia be dia be aza ny odinao.
10 Fa nitoky tamin'ny faharatsianao* ianao ka nanao hoe: Tsy misy mahita ahy. Ny fahendrenao sy ny fahalalanao dia nampivily anao, ka dia nanao anakampo ianao hoe: Izaho no izy, fa tsy misy afa-tsy izaho.[Na: hafetsenao]
11 Kanjo hanjo anao ny fahoriana, nefa tsy ho fantatrao izay fanafany*; Ary hahazo anao ny loza, nefa tsy ho hainao ny fanàlany; eny, hanjo anao tampoka ny fandringanana izay tsy ampoizinao.[Na: iposahany]
12 Arosoy ary ny odinao sy ny hamaroan'ny fankatovanao, izay efa nisasaranao hatry ny fony ianao mbola kely; Angamba hahavita izay mahasoa ianao; angamba ho tonga mahatahotra ianao.
13 Sasatra noho ny hamaroan'ny fisainanao ianao; aoka hitsangana ankehitriny ireo mpamantatra* ny lanitra sy mpandinika ny kintana ireo hamonjy anao, dia ireo mpanambara isaky ny tsinam-bolana izay zavatra ho tonga aminao**. [*Heb. mpizarazara] [*Na: Aoka hitsangana ankehitriny ireo mpamantatra ny lanitra sy mpandinika ny kintana ireo hamonjy anao amin'izay hanjo anao]
14 Indro, fa ho tahaka ny vodivary ireo; ho main'ny afo izy ka tsy hahavonjy ny tenany amin'ny herin'ny lelafo akory; tsy misy vainafo hamindroana, na afo hitaninana aza.
15 Ho toy izany aminao ireo efa nisasaranao ireo, dia ireo nifampivarotra taminao hatry ny fony ianao mbola kely; samy hipariaka mandositra ho any amin'ny fonenany avy izy, ka tsy hisy hahavonjy anao.
Raha resaka horoscope, cartomancie sns... dia efa fantatra ao anaty Baiboly io ambony io izany.
Voatsipika tsara izy eto fa tsy ara-panahy mihitsy.
Ny ara-panahy dia fiainana mandrakizay na fiainana aorian'ny fodiamandry.
Misy endrika roa anefa ilay fodiamandry : ny iray mahazo fiainana mandrakizay ary ny faharoa kosa mahazo fahaveresana mandrakizay.
Voalaza tsara eo amin'ny andininy faha-14 ny hanjo ireo olona ireo izay tsy miraharaha izay ara-panahinao any fa izay hahazoanao laza eto an-tany no imasoany dia milaza izy fa mahery.
Tsipihiko fa fandinihina ny an'ny Boudha sy izay voatanisanao etsy ambony fa ny resaka fankatovana indray dia tsy fandinihina fa fampanantenana olona fa hahazo izatsy na izaroa ary manambara ny zavatra hitranga amin'ilay olona misy fe-potoana mazava tsara.
Dia ahirato tsara ny masonao Rhaj0 fa aza dia manao eritreritra manidina an!
Raha hiresaka ianao hoe mpandrebireby ny olona mijoro fa nisy zava-nihatra taminy ka nahalalany fa tsy nofo fotsiny izy fa fanahy ary indrindra indrindra nampahafantarina ny vatany rahatrizay mandao ny tany dia efa anisan'ny donto ianao izany.
Dia toy ity resahan'i Jehovah ity no manjo anao (Isaia 48 indray jerena ):
1 [Fampahatsiarovana ny lasa, sy filazana ny ho avy, indrindra fa ny hanafahana ny Isiraely avy any Babylona] Mihainoa, ry taranak'i Jakoba, dia ianareo izay antsoina amin'ny anaran'Isiraely sy avy amin'ny loharanon'i Joda, ianareo izay mianiana amin'ny anaran'i Jehovah ary mankalaza ny anaran'Andriamanitry ny Isiraely, kanefa tsy araka ny marina, na araka ny hitsiny;
2 Fa milaza ny tenany ho avy amin'ny tanana masina izy ka miankina amin'Andriamanitry ny Isiraely; Jehovah, Tompon'ny maro, no anarany.
3 Ny zavatra taloha dia efa voalazako hatramin'ny fahiny, ary naloaky ny vavako izany sady nambarako; Tampoka no nanaovako izany, ary tonga izany.
4 Satria fantatro fa maditra ianao, ka ozaby ny hatokao, ary varahina ny handrinao,
5 Dia nambarako taminao hatramin'ny fahiny izany, eny, fony tsy mbola tonga aza izany, dia efa nambarako taminao rahateo, fandrao hataonao hoe: Ny sampiko no nanao izany, ary ny sarin-javatra voasokitra sy ny sarin-javatra anidina no nandidy izany.
6 Efa renao, ka dia jereo izany rehetra izany, moa ianareo tsy hanambara izany va? Mampandre anao zava-baovao kosa Aho hatramin'izao, dia zavatra miafina izay tsy fantatrao.
7 Vao izao no namoronana azy, fa tsy hatramin'ny fahiny, ary tsy mbola nandre azy ianao talohan'ny andro anio, fandrao ianao hanao hoe: Indro, ny efa fantatro ihany izany.
8 Fa tsy nandre na nahalala ianao; Eny, hatramin'ny fahiny aza no tsy mbola nisokatra ny sofinao; fa fantatro fa tena mpivadika ianao sady natao hoe mpiodina hatrany an-kibo.
Ireo voatsipika ireo no manjo an-dRhaj0.
Ny tiana ambara fotsiny dia hoe rehefa tsy mahalala ny Mpamorona azy ny olona dia manao adaladala vakian'Andriamanitra fotsiny.
rhaj0 - 17/08/2017 20:12
Miharena Raha resaka horoscope, cartomancie sns... dia efa fantatra ao anaty Baiboly io ambony io izany.
Ireo Magin'i Jesosy anie ry Miharena ka "astrologues" eee..
Astrologue == horoscope.
Dia ao ianao izany ry Miharena aaa...
Miharena Raha hiresaka ianao hoe mpandrebireby ny olona (NDLR: Profeta Tsaratsara) mijoro fa nisy zava-nihatra taminy ka nahalalany fa tsy nofo fotsiny izy fa fanahy ary indrindra indrindra nampahafantarina ny vatany rahatrizay mandao ny tany dia efa anisan'ny donto ianao izany.
Izany hono ry namana (Kristiana) eto @ serasera izay nitsangam-bolo @ hagaigan'i Tsaratsara (sy ny mpanaraka azy) : anisan'ny donto ianao izany, hozy Miharena.
Miharena - 17/08/2017 20:28
Aza dia tezitra aloha fa fomba fiteny io donto io aloha ho an'ny mafy sofina sy mody tsy mihaino e!
Indraindray koa domina kely mba hifoha fa raha avela amin'izao sao manary lamba e!
Ny namana ve ariana moa!
Fa miverina etsy ambony amin'ilay hoe Magy mpmaky kintana isika. Eny dia eny no ilazana fa mpamaky kintana ny Magy fa ny kintana vakiany fotsiny tsy mitovy amin'ny an'ny sasany izay manambara hoe hahazo vola ianao anio ami'ny folo ora alina.
Ny Kintana hitany teo dia izay manambara ny fiavian'ny Tompo ary zava-miafina amin'ny olona be politika toa an'i Heroda io.
Tany amin'ny fifanakalozana hafa aza aho anie nilaza fa ny olombelona tsirairay dia azo hoarina amin'ny kintana ary mamiratra noho ny kintana aza e!
Fa ny kintana manko raha tena zohina zavatra ihany fa ny Olona kosa hafa mihitsy e!
rhaj0 - 17/08/2017 20:39
Miharena Eny dia eny no ilazana fa mpamaky kintana ny Magy fa ny kintana vakiany fotsiny tsy mitovy amin'ny an'ny sasany
Eny ho'a eee.. rahefa ny inoanao no mamaky kintana dia volamena, fa rehefa ny hafa dia volamavo.
Mba hainao ve k'lou ry Miharena hoe, inona no ataon'izany Astrologue izany, na Magy izy na Moka ee... hoe ny inona @ kintana no ifotoran'izay lazainy ao.
Miharena - 17/08/2017 20:50
Ny fihetsiky ny kintana no jeren'ireny olona ireny ary fantatra izany fa asa aloha hoe inona no mahatonga anao tsy hahazo izay voambarako hoe eny dia eny teo.
Ny kintana hitan'ny Magy dia mifamaly amin'ny faminaniana efa ela no niandrasana ny fahatanterahany.
Tsy hoe manamavo ny mpamaky kintana hafa aho fa voambara ao anaty Baiboly fotsiny hoe tsy ireny akory no tokony hitokisana satria fampanantenana izay zava-mora lo avokoa ny ataon'ireny ka ny tenany aza tsy ho voavonjiny.
Dia raiso amin'izay vakiteny tsotra izay ilay izy.
rhaj0 - 18/08/2017 04:38
Efa noresahina teto foana io re ry Miharena fa aleo averiko indray azany ee...
Ny Magy, t@ l'an zero, dia rahefa nahita ny kintana Regulus sy ny planeta Jupiter izay nifanojo, izay lasa namirapiratra be, dia ... lasa gaigy, ary nampifandray an'io famirapiratana io @ redirevi-na mpaminany (be vinany) taloha io ry Astrologues isany. Ary mbola honohono be azany io fihaonana tao an-tranon'omby io, satria dia ny Magy sy Maria ary Jezefa ihany no vavolombeloona nifamokivoky tao.
Dia torak'izany koa ny mpanao horoscope. Rahefa mifanojo ao @ constellation Taureau ohatra ny kintana manan-drambo, dia lazain'ny Astrologue fa i Miharena, izay teraka Taureau ao io, dia lasa sirika fa mivaralila, rahefa lalovako dia hazavaiko.. izaho @ io ilay kintana manan-drambo..
Izay fa raiso tsotra iliay izy eee
Miharena - 19/08/2017 10:48
Tsy ilay resakao anie no tsy mazava Rhaj0 fa fantatra fa namaky kintana ny olona taloha ka hatramin'izao fa tsy isan'ny mahavonjy ny olona ny famakiana kintana raha ny soratra voalaza eo amin'ny Isaia ireo.
Ny fifandraisana amin'Andriamanitra Mpahary ihany no izy reha io resaka voalaza eo ambony ireo.
Ka raha Magy no namaky kintana dia tsy mahagaga ary zavatra fanao taloha izany.
Ny fikarohana rehetra mahazo manao azy aby ny olona hijerena hoe tamin'ny oviana marina moa io tranga tamin'ny taona aotra io no niseho?
rhaj0 - 21/08/2017 01:14
Miharena fantatra fa namaky kintana ny olona taloha ka hatramin'izao fa tsy isan'ny mahavonjy ny olona ny famakiana kintana raha ny soratra voalaza eo amin'ny Isaia ireo.
Eny ho,a ee..
1- "namaky kintana" ny Magy. Fa "tsy nahavonjy" ilay notondroin'ilay Kiintana ka narahin'ireto Magy eee..
bravo Miharena. izaho indray ve ho'a hi-contredire anao @ izany
2- Isaiah ben Amoz anie ka efa ho 800 taona talohan'i Isa ibn Mariam eee...
(hi hi hi.. mba fantatrao ve ry Miharena i Isa ibn Mariam??? Aleo tonga dia lazaiko: I Jesoa zanak'i Maria io)
Miharena - 21/08/2017 06:00
Ilay resaka Magy namaky kintana tsisy idiran'ny hoe tsy nahavonjy ny notondroin'ilay kintana.
Ny mahavoa antsika izay mikaza fa tsy mahavonjy Jesoa anie dia heveriny fa indray mipi-maso dia afaka avokoa izao faharatsiana rehetra izao e!
Io faharatsiana nisy teto an-tany anarivorivon-taona maro io no nahatonga ny fanavotana tsy tafita malaky.
Aiza ka hatramin'izao fotoana izao mbola misy ny manamboatra fitaovam-piadiana nefa milaza azy ho mandroso hono! Ary ireo olona ireo no mivoy ny ateista mba hahafahany manao izay tiany na koa aza mahalala ilay tantara rehetra ihany dia mitoky amin'i Satana.
Eto indray izao ianao dia mety hilaza ve hoe tsisy Satana Rhaj0?
rhaj0 - 21/08/2017 14:12
Miharena Aiza ka hatramin'izao fotoana izao mbola misy ny manamboatra fitaovam-piadiana
I Jesosy azany (nirehareha) nitondra sabatra... Dia i Vatican mi-investir @ mpamboatra fitaovam-piadiana.
Fa eritrerto tsara ao ihany ry Miharena, fa Kristiana anie ireo Zamerikana nampaniraka ny amboarana sy ny andatsahana ny baomba atomika ohatra. i Truman dia tena kristiana lalina noho ianao Miharena fa tandremo kely ho'a an... ry Einstein efa niteny hoe, diso izy nanohana ny famboarana, fa adabohy any io programa io, fa ry Truman no mbola nisisika, ary tena "nobitsihan'Atra" izy no nampisisika sy nampiziriziry azy ny hanao foana an'io an...
Miharena Eto indray izao ianao dia mety hilaza ve hoe tsisy Satana Rhaj0?
TSISY izany Satana izany ry Miharena fa imazinasio (kolektiva) anareo Mpino daholo izany aa...
Lazaovy azany hoe, toatoa ny ahoana izany Satana izany??
Dia hahita ianao, fa samy manana ny imazinasion-ny izay miteny eo.
Miharena - 22/08/2017 12:49
Fa io imazinasion kolektiva io izany mahaforon-java-mahagaga aminao koh!
Ilay fanaovana fitaovam-piadiana anie dia mazava fa fitaivan-tena no mahatonga azy hisy e!
Tantara mipetraka ny namonoan'i Kaina an'i Abela satria tsara kokoa noho ny toetrany ny azy.
dia averina ilay tantara tao amin'ny Genesisy nilazana fa raha manohitra ny hafatry ny Mpamorona anao ianao dia ho faty tokoa, nefa nisy ilay nanohitra ny hafatra fa nilaza zavatra hafa tamin;ny voary, dia Eva izany.
Hevero indray hoe imazinasion ny fisian'ny fialonana eh!
Aza manao bontolo ho'aho rehefa mamaly hevitra fa hazavao tsara ny hevitrao hanamporofoanao fa tsy misy ny antokon'olona manaraka ny tsy fankatoavana ny rindran-damin'ny Mpamorona izao rehetra izao.
rhaj0 - 22/08/2017 13:36
rhaj0 Lazaovy azany hoe, toatoa ny ahoana izany Satana izany??